NISA oo durba jebisey amarkii Ra’iisul Wasaare Rooble & mas’uul loo diidey inuu ka dhoofo Muqdisho.
July 23, 2021 Xuseen 1
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo Cismaan Nuur Haaji Macaliow ayaa Saaka mar kale loo diiday in uu ka dhoofo garoonka diyaaraddaha ee magaalada Muqdisho xilli uu kusii jeeday degmada Garbahaarey ee gobolka Gedo.
Guddoomiyihii hore ee gobolka Gedo oo markii afraad oo xiriir ah loo diidey inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay inuu amarkaani yahay mid ka soo baxay saraakiil ka agdhaw madaxweyne Farmaajo iyo taliye ku-xigeenka hay’adda sirka qaran ee NISA Cabdullaahi Kulane.
Tallaabadaan ayaa waxa ay ka dhigan tahay in saraakiisha hayadda NISA ay durba jebiyeen amar ka soo baxay Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo dhowaan sheegay inaan qofna arrimo siyaasadeed loogu diidi karin inuu magaalo ka dhoofo ama mid kale ka dego.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhowaan ka hadlay arrinta la xiriirta in ay jiraan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad loo diiday in ay u dhoofaan gobolka Gedo, isaga oo ku amray hay’adda Nabad-sugidda ee NISA iyo ciidamada boolisku in aysan qofna ka celin karin halka ay u dhoofayaan.
Bog kasta ayaa lagu arkayaa cinwaanno iyo warar toos looga tebinayo inay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee koonfurta siikordhiyeen ololahooda “doorasho” ee qabyadaaleysan, mana aha wax iyaga kukooban ee dalka oo dhan ayuu jawigu sidaas yahay. Maxaa sababay oo inooga dhexmuuqda weeye su’aasha isweyddiinta mudan.
Waxay jawaabtu salka dib ulahaleelaysaa isla xaqiiqada aan sina looga gabban karin ee aan indhawaaleba kor iyo hoosba halkan Soomaalida ugubidhaaminayay, waana xaqiiqada ah in doorashadan qalaad uusan hannaankeedu weli dalkeenna kahirgashanayn oo aysan suurtagal ahayn inay kaqabsoonto waqtigan xaadirka ah.
Sikastoo la isu-inkirsiiyo, runtu waxay tahay in waxa lamalmalluuqi doono aysan doorasho rasmi ah ahaan doonin ee ay noqon doonto yacyacood aan siyaasadda dalka xasilin doonin, inay siiqasto mooyaanee. Shacabka Soomaaliyeedna waa lagu dul khamaarayaa oo qiilkan doorashada ayaa dundia wax lagagasii hambagayaa oo qawda loogu maqashiinayaa; qawsaar, qawleyste, iyo tuug kasta oo shaxda ku dulciyaarayana reer iyo juffo uu isaguba gabbaadayo ayuu iskuhubaa oo gabbood kadhiganayaa.
Markaa, Soomaalidu luggooyada laguhayo hadhaaddo oo inta uu dalku hannaanka Galbeediga ee lagu dirqinayo qummaati uhagoogan doono, dawladnimo iyada hiddaheeda iyo dhaqankeeda iyo qabyaaladdeeda ku dulqotonta ee katarjumaysa ha haybsato si ay calal-aqal silacan, saxariirtan, iyo sab’oolnimadan aadmiga katakooray ugabaxdo.
Sikastoo aan Soomaalida badankeeda kagatakoornahay, anigu waxaan qabaa aragtida iyo dareenka ah inuusan hannaanka Galbeedigu Soomaaliya kahirgali karin iyada oo ay Soomaalidu muslinnimo sheeganayso, waayo hannaankani kan Islaamka ayuu cagsi iyo lidba kuyahay oo bulsho teenna oo kale ah isma qaban karaan aslanba.
Runtu taas weeye, cid oggol iyo cid diiddanba.